xmen days of future past ( 2014 ) မြန်မာစာတန်းထိုး ~ ချမ်းငြိမ်း-မှော်ဝန်း
9:50:00 PM 2014, movies, မြန်မာစာတန်းထိုး ရုပ်ရှင် No comments
ဒီဇာတ်ကားကိုအရင် ၂ ခါတင်ပေးဖူးပါတယ်..
အခု မြန်မာစာတန်းထိုးနဲ့ ထက်တင်ပေးလိုက်ပါတယ်..
ဒီဇာတ်ကားကတော့ ပရိတ်သတ်တွေ တော်တော်များများ စောင့်မျှော်နေတဲ့ကားဖြစ်ပြီး၊ စောင့်ရကြိုးနပ်တယ်လို့ ပဲပြောပါရစေ။ အကောင်းဆုံး Superhero ကားမဟုတ်ရင်တောင်မှ အကောင်း ဆုံး X-Men ဇာတ်ကားတစ်ကား ဖြစ်သလို၊ လက်ရှိ နွေရာသီရဲ့ အကောင်းဆုံး ဇာတ်ကား ဖြစ်ပါတယ်။ Godzilla နဲ့ X-Men က ဒီနှစ်နွေရာသီရဲ့ ကျွန်တော့်အကြိုက်ဆုံး ဇာတ်ကားတွေဖြစ်ပါတယ်။
ဒီကားအကြောင်းမပြောခင် တစ်ခုကြို ပြောချင်တာက X-Men: Days of Future Past မကြည့်ခင်၊ X-Men Trilogy နဲ့ X-Men: First Class တို့ကိုတော့ ကြည့်ဖူးထားဖို့လိုပါမယ်။ သာမန်ရုပ်ရှင်ကြည့် ပရိတ်သတ်ဆိုရင် ကြည့်ထားဖို့ပိုလိုပါတယ်။ ဘာလို့လည်းဆိုတော့ ဒီဇာတ်ကားနှစ်ကားနဲ့ လက်ရှိ ဇာတ်ကား က အဆက်အစပ်ရှိနေလို့ပါ။ ကာတွန်းကြည့်ဖူးတဲ့သူတွေကတော့ ဇာတ်လမ်းတွေသိပြီးသား ဖြစ်မှာပါ။
ဇာတ်လမ်းမပြောခင် Spoiler အနည်းငယ်ပါမယ်လို့ကြိုသတိပေးချင်ပါတယ်။ ဇာတ်လမ်းကတော့ The Wolverine ဇာတ်ကားအပြီး ကနေဆက်ထားပြီး၊ ဇာတ်လမ်းအစမှာ Trailer မှာပါတဲ့ Sentinel တွေနဲ့ X-Men တွေ တိုက်ခိုက်တဲ့အခန်းနဲ့စထားပါတယ်။ ဒီမှာ X-Men အဖွဲ့က Kitty Pryde ရဲ့ ပါဝါကိုသုံးပြီး သူတို့အဖွဲထဲက တစ်ယောက်ကို အချိန်နောက်ပြန်ပို့ပြီး Sentinel တွေလာတော့မယ်ဆိုပြီး သတိပေးပြီး နေရာပြောင်းခိုင်းပါတယ်။ ဒီလိုနည်းနဲ့ သူတို့ ထွက်ပြေးနေရာကနေ၊ Professor X, Logan (wolverine), Magneto, တို့က Sentinel Program စတင်ခဲ့တဲ့ ၁၉၇၀ ကျော် လွန်ခဲ့တဲ့နှစ် ၅၀ ကို ပြန်သွားပြီးတော့ အတိတ်ကို ပြောင်းလဲဖို့ကြိုးစားပါတယ်။
ဒီအစီအစဉ်မှာ တစ်ခြားဘယ်သူ့ကိုမှ ဒီလောက်အဝေးကြီး ပြန်လွှတ်လို့မရဘဲ၊ Wolverine တစ်ယောက်သာလျှင် သူ့ရဲ့ Healing Power ကြောင့် ဒီ Mission ကိုဆောင်ရွက်နိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။ ဘယ်လို တားဆီးမယ် ဘာကို တားဆီးရမယ်ဆိုတာတော့ ပိတ်သားထက်မှာ ဆက်လက်ကြည့်ရှုကြတာ ပိုပြီး အရသာရှိပါတယ်။
ဇာတ်လမ်းအားဖြင့် တကယ်ကောင်းမွန်ပြီး၊ အကွက်စေ့အောင်ရိုက်သွားနိုင်ပါတယ်။ ဒီထဲမှာ Quicksilver ရဲ့ ထောင်ဖောက်တဲ့အခန်း ကလည်း တစ်ကားလုံးမှာ အကောင်းဆုံး အခန်းဖြစ်ပြီး၊ ဒါရိုက်တာ Bryan Singer က Quicksilver ကို အောင်အောင်မြင်မြင် ရိုက်ပြသွားပါတယ်။ Avengers မှာ ပါမယ့် QS က Godzilla မင်းသားဖြစ်ပြီး၊ ဒါရိုက်တာကလည်း မတူတော့ ပရိတ်သတ်တွေအနေနဲ့ ဒီလောက်ကောင်းအောင် ရိုက်ကူး နိုင်ပါ့မလားလို့ စိုးရိမ်နေကြပါတယ်။
ဒါ့အပြင် X-Men ၃ကားက ကာရိုက်တာတွေနဲ့ X-Men First Class က လူတွေပေါင်းရိုက်ထားတာလည်း ပညာသားပါပြီး၊ Mutant တစ်ယောက်တည်းကို အခြေခံရိုက်ကူးထားတာမဟုတ်ပဲ၊ အားလုံး ညီတူညီမှ ပါဝင်အောင် ရိုက်ကူးထားပါတယ်။ James McAvoy ရဲ့ Charles Xavier အငယ်နဲ့ Patrick Stewart ရဲ့ Charles Xavier အကြီး တို့ စကားပြောခန်းလည်း ပါပါသေးတယ်။
Comic Fan တစ်ယောက်အနေနဲ့ အနည်းငယ်စိတ်မကြေနပ်စရာကတော့ Wolverine နဲ့ Sentinel တွေ ချတဲ့အခန်း၊ Wolverine ရဲ့ Adamantium claws တွေနဲ့ Sentinel တွေကို ဖျက်ဆီးတဲ့ အခန်းတွေ လုံးဝမပါပါဘူး။ ဒါ့အပြင် ပရိတ်သတ် အချစ်တော် တွေဖြစ်တဲ့ Colossus, Blink, Ice-Man, Bishop တိုလည်း အနည်းငယ်စီပဲ ပါဝင်ရပါတယ်။ တကယ်ဆို အပိုင်းနှစ်ပိုင်းခွဲပြီး Part 1 &2ဆို ခွဲရိုက်ရင် ပိုပြီး ကောင်း ကောင်း ကြည့်ရနိုင်ပါတယ်။
ဒါပေမယ့်လည်း ဇာတ်လမ်းအရ အရေးပါတဲ့ဇာတ်လမ်းဖြစ်ပြီး၊ X-Men Franchise နဲ့ Marvel Universe တို့အတွက် တော့ အရေးပါတဲ့ ဇာတ်ကားလို့ပြောလို့ရပါတယ်။ ဘာလို့လည်းဆိုတော့ X-Men: Days Of Future Past ဇာတ်လမ်းကြောင့်၊ X-Men:The Last Stand နဲ့ X-Men Origin Wolverine မှာဖြစ်ပျက် ခဲ့တဲ့ အဖြစ်အပျက်တွေက လုံးဝမရှိတော့ပါဘူး။ ဆိုလိုချင်တာက ဒီကားနှစ်ကားက အဖြစ်အပျက်တွေက လက်ရှိ Timeline မှာမပါတော့ပါဘူး။ X-Men 1 &2နဲ့ The Wolverine တို့အဖြစ်တွေကတော့ ရှိနေဦးမှာပါ။ X-Men: First Class ကတော့ ဒီအဖြစ်အပျက်တွေ အားလုံးရဲ့အစပါ။
အချုပ်ပြောရရင်တော့ ဇာတ်ကားကောင်းတစ်ကားပါ။ ဒီကားက ပရိတ်သတ် အမြင် အကပ်ဆုံး ဇာတ်ကား နှစ်ကားဖြစ်တဲ့ X-Men:The Last Stand နဲ့ X-Men Origin Wolverine တို့ ကို Erase လုပ်လိုက်သလို၊ ကာတွန်း က ဇာတ်လမ်းကိုလည်း တူနိုင်သမျှ တူအောင် သွားနေပါတယ်။ အထူးသဖြင့် Wolverine သူ့ရဲ့ မှတ်ဥာဏ်တွေ ဘယ်လို ပျောက်သွားတယ်၊ သူ့ကိုယ်ထဲကို Adamantium သတ္တု ဘယ်လို ရလည်းဆိုတာပါ အမှန်ပြင်ပေးထားပါတယ်။ (Origin က ဇာတ်လမ်းက ကာတွန်းနဲ့ကွဲပါတယ်။) William Stryker အငယ်ဘ၀က ဒီကားမှာပါပြီး၊ Wolverine နဲ့ ဘယ်လိုတွေ့သွားလည်းတယ်၊ Wolverine ရဲ့ မှတ်ဥာဏ် ဘယ်လိုပျောက်သွားမယ်ဆိုတာ လည်း ပြထားပါတယ်။
Action Scene တွေ သိပ်မများလို့ အားမရတဲ့သူတွေရှိပေမယ့် ဇာတ်လမ်းအရ အရေးပါပြီး၊ ကြည့်ကိုကြည့်သင့်တဲ့ကားပါ။ ဇာတ်ရှိန်အတက်အကျကောင်းသလို ပရိတ်သတ် အကြိုက်တွေ့မှာသေချာပါတယ်။ ကြည့်ကိုကြည့်သင့်ပါတယ်။ ရုံတင်ရင် သွားကြည့်သင့်တဲ့ဇာတ်ကားကောင်းတစ်ကားပါ။ မိသားစုတူတူကြည့်နိုင်ပါတယ်။
ဒီကားရဲ့ ဇာတ်လမ်းလုံးဝအဆုံး (စာတမ်းအားလုံးထိုးပြီးမှလာတာပါ) မှာ X-Men: Apocalypse အတွက် အမြည်းပေးထားပါတယ်။ Apocalypse က လွန်ခဲ့တဲ့ နှစ်ငါးထောင်ထဲက အသက်ရှင်နေတဲ့ ပထမဆုံး Mutant ပါ။ သူက က Immortal လည်းဖြစ်ပါတယ်။ လက်ရှိ X-Men: Days of Future Past မှာ ဖြစ်ခဲ့ တဲ့ အဖြစ်အပျက်တွေကြောင့် သူ့ရဲ့ Timeline လည်းပြောင်းလဲပြီး တဖန်ပြန်ပေါ်လာမှာဖြစ်ပါတယ်။ အဲ့ဒီကားက ၁၉၈၀ ကျော်ကာလတွေကို အခြေခံပြီးရိုက်ကူးမှာဖြစ်ပါတယ်။
X-Men: Apocalypse မှာ First Class က လူတွေပဲပြန်ပါမှာဖြစ်ပါတယ်။ Quicksilver လည်းပါလာမှာဖြစ်ပြီး Wolverine တောင်ပါမပါ မသေချာပါဘူး..။
#ရုပ်ရှင်မိတ်ဆက် မှ ကူးယူဖော်ပြပါသည်..။
Like ကလေးတချက်နှိပ်ပြီး အားပေးခဲ့ပါအုန်း..
Transformers: Dark of the Moon (2011) မြန်မာစာတန်း...
Prison Break အပိုင်း ၁၆ ( မြန်မာ စာတန်းထိုး )
Prison Break အပိုင်း ၁၅ ( မြန်မာ စာတန်းထိုး )
Prison Break အပိုင်း ၁၄ ( မြန်မာ စာတန်းထိုး )
ရိုမန်ဘော့ ကမ္ဘာ ( pdf )
Cleaner Professional & Bussiness Edition. v4.15
Prison Break အပိုင်း ၁၃ ( မြန်မာ စာတန်းထိုး )
Prison Break အပိုင်း ၁၂ ( မြန်မာ စာတန်းထိုး )
Prison Break အပိုင်း ၁၁ ( မြန်မာ စာတန်းထိုး )
Slideshow 365 Android Apk
Prison Break အပိုင်း ၁၀ ( မြန်မာ စာတန်းထိုး )
Prison Break အပိုင်း ၉ ( မြန်မာ စာတန်းထိုး )
Driver Navigator v3.4.8.14
Prison Break အပိုင်း ၈ ( မြန်မာ စာတန်းထိုး )
Prison Break အပိုင်း ၇ ( မြန်မာ စာတန်းထိုး )
Prison Break အပိုင်း ၆ ( မြန်မာစာတန်းထိုး )
Prison Break အပိုင်း ၅ ( မြန်မာ စာတန်းထိုး )
Prison Break အပိုင်း ၄ ( မြန်မာ စာတန်းထိုး )
ကမ္ဘာဖလား ဘောလုံးပွဲတွေကို ကွန်ပျူတာ သို့မဟုတ် ဖုန်...
Android 4.2.2 နှင့် အထက် ကို ဖုန်းထဲကနေ Root ဖို့
Prison Break အပိုင်း ၃ ( မြန်မာ စာတန်းထိုး )
Internet Download Manager v6 .20 build 5
Internet Download Manager v6 .20 build 3
ကမ္ဘာဖလား ဘောလုံးပွဲကို ဖုန်းနဲ့ တိုက်ရိုက်ကြည့်ဖို...
Prison Break အပိုင်း ၂ ( မြန်မာ စာတန်းထိုး )
Prison Break အပိုင်း ၁ ( မြန်မာ စာတန်းထိုး )
Internet Download Manager v6 .20 build 2
ကမ္ဘာဖလား ဘောလုံးပွဲကို PC နဲ့ ကြည့်မရဘူးဆိုတဲ့သူတေ...
Rio2(2014) မြန်မာစာတန်းထိုး
Gallery Vault Hide Video Photo PRO.Apk
Tom And Jerry Mouse Trouble 2014 CD 2
ဖုန်းတွေမှာ မြန်မာစာရေးရ ဖတ်ရ အဆင်မပြေရင်..
The Four ( 2012 ) မြန်မာစာတန်းထိုး
xmen days of future past ( 2014 ) မြန်မာစာတန်းထိုး...
Nero 8 Micro v8.3.20.0
ကျနော့် ဘလော့လေး နှင့် Domain Name